Nairobi:-Waxaa Akhristayaasha Halgan.net ee sharafta leh u soo gudbinayanaa Khudbo Jimcihii uu Allaha dhowree uu ka akhriyey Masjidka Abuubakar ee magaalada Nairobi Sheekh Maxamed Cabdi Umal Sheekh Umal ayaa waxaa uu ka hadlay kuwa wax isku dirdira oo dadka hadalka u kala qaadqaada isagoo Sheekhu uu soo arooriyey Axaadiista iyo Aayaadka Quraanka ee ku soo arooray kuwa ku mashquulsan isku dirdirka bulshada kuwaas oo alle u balan qaaday cadaab adag maalinta ay geeriyoo daan.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxaa uu bulshada Soomaaliyeed uga digay in ay iska ilaaliyaan wax sheega aan la hubsan iyo in umada la isku dirdiro oo wax aan jirin lala ordo.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa xusay i arrinku aysan ku ekeyn kaliya dadka caamada ah balse dadkii ducaada ay arrinkaas qaarkood asiibtay allaha ka caafiyee oo shaqo laga dhigtay war aan la hubin oo la iska sheego .
Sheeikh ayaa ka digay in la dhagayso kuwa fusaaqda ah ee wararka beenta iyo isku dirka dadka ka dhex wada iyadoo ay xitaa gaartay in kooxa iyo ururda diinta íyo culimada la isku soofeeyo taas oo ah wax lagu yaqaan faasiqiinta .
Hoos ka Dhagayso Khudbadii Jimce ee Sh.Maxamed Cabdi Umal ka jeediyey maanta Masjidk Abubakar ee magaalada Nairobi oo cod ah.
[Audio:http://k003.kiwi6.com/hotlink/o8iq2hoc04/khudbojimce.mp3] Ama halkan
Khudbadii Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo maqal iyo Muuqaal ah Hoos ka Daawo